एचटी होम | युनाइटेड किंगडम फ्रन्चाइजी | Franchiseek
»फ्रेंचाइजी अवसरहरू»एचटी होम्स फ्रन्चाइज
कुनै फ्रान्चाइजी शुल्क बिना - बिक्री, भाँडा र सम्पत्ति प्रबन्धनमा विशेषज्ञता कम लागत सम्पत्ति फ्रैंचाइजी पत्ता लगाउनुहोस्!
HT Homes मताधिकार
एचटी होम्सहरू बेलायतमा स्वतन्त्र एस्टेट एजेन्ट व्यवसाय हो जुन बिक्री, भाँडो र व्यवस्थापनमा माहिर छ। बढ्दो मागको कारण, एचटी होम्सहरूले एचटी होम परिवारलाई फ्रान्चाइजीको रूपमा उनीहरूको स्थानीय क्षेत्रमा ल्याउन इच्छुक व्यक्ति वा टोलीहरू खोजिरहेका छन्। एचटी होम्स फ्रेंचाइजीको साथ तपाईले income आय स्ट्रिमहरूबाट फाइदा लिनुहुनेछ जुन निम्न हुन्:
बिक्री र लेटि।
टेन्सी फेला पार्दै
हामीले एचटी होमहरू स्क्र्याचबाट अप फ्रन्ट, इमान्दार र पारदर्शी हुँदै विशेष गरी जब यो हाम्रो व्यवसायको पैसाको पक्षमा आउँदछ। परम्परागत - - job काम भन्दा फरक, एचटी होम्सको साथ तपाईले जति मेहनत गर्नुभयो त्यत्ति नै तपाईको व्यवसायबाट बाहिर निस्कनुहोस्। कमाई सम्भावना र लगानीमा पूर्ण विवरण प्राप्त गर्न, कृपया हाम्रो सूचना प्याक प्राप्त गर्न तल सोध्नुहोस्।
एचटीमा के समावेश छ Homes मताधिकार?
जब तपाईं एचटी होम्समा सामेल हुनुहुनेछ, तपाईंले तलका उपकरणहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईंको नयाँ इस्टेट एजेन्सी व्यवसाय बढाउनमा मद्दत गर्न।
१० estate ० एस्टेट एजेन्सी सफ्टवेयर
फ्लोरप्लान र निरीक्षण सफ्टवेयर
भाडा समर्थन - क्रेडिट चेक, सन्दर्भ
सामाजिक मिडिया अभियान
कल प्रबन्धन समर्थन
एक समर्पित फोन नम्बर नि: शुल्क युके लैंड लाइन कलहरूको साथ
कुनै पनि समय छोड्न सक्दछ (कुनै बाध्य अनुबन्ध छैन)
कुनै मताधिकार शुल्क छैन
HT Homes प्रशिक्षण र समर्थन
तपाईं गहन आवासीय प्रेरणा कोर्समा तपाईं पहिलो चरणहरू लिनुहुनेछ जहाँ तपाईं एक महान ईस्टेट एजेन्ट र एचटी होम्स परिवारको सदस्य बन्नको लागि आवश्यक सबै कुरा सिक्नुहुनेछ। प्रशिक्षण समावेश:
तपाइँको ब्यापार कसरी मार्केट गर्ने र एउटा ब्रान्ड निर्माण गर्ने।
कसरी तपाईं एक सम्पत्ति मूल्य।
कसरी एक सम्पत्ति फ्लोर योजना बनाउने।
व्यावसायिक गुणवत्ता गुण फोटोग्राफ कसरी लिने।
कसरी स्पष्ट र बाध्यकारी सम्पत्ति विवरण लेख्ने र तिनीहरूलाई सफलतापूर्वक सूचीकृत गर्ने।
तपाईको ग्राहकको तर्फबाट कुराकानी गर्न उत्तम तरिका।
समर्थन जहिले पनि हातमा हुन्छ यदि तपाईंसँग ईमेल चलाउने र टेलिफोन दुबै मार्फत व्यापार चलाउने पक्षमा कुनै प्रश्नहरू छन्।
एचटी होम्स फ्रेंचाइजीको बारेमा थप विवरणहरू प्राप्त गर्न, कृपया तल क्लिक गर्नुहोस् जाँच गर्न। हामी तपाइँलाई लगानीको बारेमा अधिक जानकारी पठाउँनेछौं, के समावेश छ, सम्भावित कमाई र अधिक। यो सोधपुछ गर्न केहि खर्च छैन, त्यसैले आज सम्पर्कमा रहनुहोस् र आफ्नो सफल भविष्यको लागि पहिलो कदम चाल्नुहोस्!